Kulan lagu taageerayo Musharax Mohamud Noor oo ka dhacay xaafada Cedar ee Magaalada Minneapolis -
Isu soo bax balaaran oo lagu taageerayo Musharax Maxamuud Nuur ayaa ka dhacay xaafada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Cedar maalintii Khamiista taariikhduna ahayd 9/28/2017.
Kulankan lagu taageerayey Musharax Maxamuud Nuur oo isagu u tartamaya maamulka goloha deegaanka degmadda 6aad ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa halkaasi isugu yimid qaar kamid ah dad weynaha degan degmadda 6aad iyo masuuliyiin sar sare oo ay ka mid ahayd Duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges.
Haddaba kulankan lagu taageerayey Musharax Maxamuud Nuur ayaa aad iyo aad uga duwanaa isku soo baxyada ama kulamada inta badan looga bartay in loo qabto siyaasiyiinta iyagu ku jira loolan kursi ama siyaasadeed. Kulankan ayaa lagu qabtay banaanka Xarunta Brian Coyle Center, waxaana qoobta laga shiday heeso ka baxay sameecado codkoodu aad u dheeryahay, heesahaas oo ku abuuray dadkii xaafada degenaa ee iyagu xaadirka ahaa in ay ka muuqato shucuur dheeraad ah oo ay ku taageerayaan musharax Maxamuud Nuur.
Ugu horeyn waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyey oo goobtaas ka hadlay Musharax Maxamuud Nuur wuxuuna halkaasi ka jeediyey qudbad dhinacyo badan taabanaysa. Maxamuud Nuur ayaa si gaar ah ugu hadlay arimaha hormarinta degaanka, shaqo raadinta, iyo nabad galyadyada, “ dadka guryo ku filan ma heystaan, waana qaali qiimaha lagu degan yahay guryaha la kiraysto”, sidaasi waxaa sheegay Maxamuud Nuur.
Sidoo kalde Maxamuud Nuur oo qudbadiisa sii wata ayaa sheegay in ay jirto kala qeyb sanaan, taasi oo uu ku tilmaamay in aanan guul laga gaarin kala qeyb sanaanta ka jirta degmada 6aad, isaga oo sheegay in loo baahan yahay hogaan cusub oo arrimaha uu xusay wax ka qaban kara, kana shaqeyn kara midnimadda iyo isku keenida dadka deegaanka degmadda 6aad ku wada nool.
Waxaa kale oo goobta ka hadashay Duqa Magaalada Minneapolis Betsy Hodges oo iyaduna taageertay Musharaxnimada Mohamud Noor. Betsy Hodges oo taageero balaaran u muujisay musharax Maxamuud Nuur ayaa tiri, “Aad baan ugu faraxsanahay in aan taageero Mohamud Noor, waa musharax iyo shaqsi karti leh oo hogaamin kara degmadda 6aad”.
Duqda Magaalada Minneapolis oo hadalkeeda sii wadata ayaa ayaa dadweynihii goobta joogay ku tiri,” Waxaan idin ka codsanayaa in aad codkiina iyo taageeradiina siisaan Maxamuud Nuur, anigu waan garab taaganahay”.
Betsy Hodges ayaa sidoo kale ka hadashay waxqabadkeedii mudadii 4-ta sanno ahayd ee ay xilka iyo hogaanka magaalada Minneapolis haysay. Betsy Hodges ayaa iyadoo shacabka xasuusisay in ay xaqiijisay si loo taageero buslhadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafada Cedar dhismaha xarunta loogu magac daray “Opportunity Center” oo ah meel tababar iyo shaqo abuuris loogu sameeyo dadka shaqada iyo xirfadaha shaqada la xiriira lagu barto.
Cali Ganey oo isagu goobtaas ku sugnaa, qaybna ka ah ololaha doorasho ee musharax Maxamuud Nuur ayaa la hadlay wargeyska Tusmo Times isaga oo yiri, ” Taageerada Betsy Hodges ay taageertay musharax Maxamuud Nuur iyo hadalka ka soo yeeray duqa magaalada Minneaplis ayaa muujinaysa in ay jirto kalsooni daro la xariirta arinta Cabdi Warsame iyadoo si gaar ah ula soo shaqeysay 4-tii sanno ee la soo dhaafay, wuxuuna hadalkani taageerada ah Cabdi Warsame iyo taageerayaashiisa ku noqonayaa nabar naxdin leh oo aanan laga soo kabsan karin waxayna dadka is waydiinayaan maxaa keenaya in Betsy Hodges ay kalsoonideeda iyo taageeradeeda siiso Maxamuud Nuur”.
Waxaa kale oo goobta ka hadlay dadweyne isugu jira Soomaali iyo Oromo kuwaasi oo taageray Maxamuud Nuur. Wax garadkii, culumadii, aqoonyahaninintii iyo dhallinyaradii goobta ka hadlay waxaa ka mid ahaa Caaqil Raabi ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in uu aad ugu xumaaday in aanan la helin hankii loo qabay iyo waxqabadkii laga sugayey gudoomiye Cabdi Warsame oo isagu hadda haya xilka gudoonka degmadda 6aad.
Haddaba waxaa si xowli leh u socda doorashadda iyo loolanka loogu jiro kuraas badan oo uu kursiga degamadda 6aad ee magaalada Minneapolis kamid yahay. Maalintii Jimcaha ee bisha September ahayd 9/22/2017 ayaa waxaa biloowday cod bixinta, waxaana ilaa iyo hadda xarunta lagu codeeyo ku sii qulqulaya dadweyne Soomaali u badan oo iyagu codkooda dhiibanaya.
Xigashadda Sawiradda: Liban Show/Mai TV